Maareeyaha Wakaalada Dhismaha, Iibka Iyo Adeega Gaarka Ah Ee Booliska DDSI Oo Kawarbixiyay Mashaariicaha Ay Wakaaladu Wado - Cakaara News
Maareeyaha Wakaalada Dhismaha, Iibka Iyo Adeega Gaarka Ah Ee Booliska DDSI Oo Kawarbixiyay Mashaariicaha Ay Wakaaladu Wado
Jigjiga(Cakaaranews) Arbaco 2da August 2017. Wakaalada dhismaha iibka iyo adeega gaarka ah ee booliska DDSI ayaa wada dadaalo horumarineed oo kala duwan islamarkaana dadaal ugu jirta siday ooga midha dhalin lahaayeen qorshaha yoolka horumarineed ee u yaala dalka iyo deegaanka.
Hadaba maareeyaha wakaalada dhismaha, Iibka iyo adeega gaarka ah ee booliska DDSI mudane Axmed Maki Cabdulaahi oo shabakada wararka ee Cakaaranews ooga warbixiyay waxqabadka wakaalada ayaa sheegay in dhamaan mashaariicihii ay waday wakaaladu meel fiican marayaan iyadoo qaarna ay gabagabo marayaan. Wuxuuna maareeyuhu xusay in mashaariicaha waawayn ee ay wakaaladu wado ee gabagabada maraya ay kamid yihiin wadada wayn ee qoraxey street oo ah wada afar haad ah islamarkaana kamid ah wadooyinka halbowlaha magaalda ah. Iyadoo 90% ay dhamaatay mudo 20 cisho gudaheed ahna lagusoo dhaymayn doono.
Sidoo kale wuxuu maareeyaha oo hadalkiisii sii wata sheegay in jiirtii dheereyd ee wadada fiiq iyo mayu maluuqo ee kabaalqabad la badalay maadaama ay caqabad ku ahayd bulshada xoolaha wata islamarkaana lagu badalay jiirta ulaag oon iyadu wax caqabad ah ku keeni doonin bulshada iyo xoolaha ay wataanba waxayna isku badalka labadaas jiirood qaateen 12km lana dhamaystiray. Wuxuuna maareeyuhu intaa ku daray in garoonka wayn ee caalamiga ee kubada cagta ee magaalada jigjiga uu marayo 10%.
Ugu danbayna wuxuu maareeyugu xusay inay wadooyinka isku xidha waangay iyo lagahida iyadana la dhameeyay halka wadada iskuxidha geeldoox iyo lagahida ay bilow tahay. Isagoo maareeyugu hadalkiisii kusoo afmeeray in dhamaan mashaaricihii ay wakaaladu waday sidii loogu talagalay u socdaan islamarkaana halkaas lagasii xoojin doono si loo gaadho yoolasha uu dalka iyo deegaankuba hiigsanayaan.